“မြင်း”လို လူလား… “ငန်း”လို လူလား… – Global News and Knowledge
“မြင်း”လို လူလား… “ငန်း”လို လူလား…
တစ်ခါက စားကျက် တစ်ခုမှာ မြင်း တစ်ကောင်နဲ့ ငန်း တစ်ကောင် ဆုံမိကြတယ်။
ငန်းက မြင်းကို ကြည့်ပြီး မြင်းရဲ့ အမူအရာကို လှောင်ပြောင် ပြောဆိုသတဲ့။ မြင်းရဲ့ ပုံစံကို သဘောမကျ၊ မထီမဲ့မြင် လို့ ထင်တယ်ဗျ။
အဲဒါနဲ့ ဘဲငန်းတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း အသံ စူးစူးဝါးဝါး နဲ့ပြောဆိုသတဲ့။ “ဟဲ့ မြင်း… ငါတို့က မင်းထက် ပိုကြီးကျယ်တဲ့ အကောင်ပါကွ… မင်းခန္ဓာကိုယ် အကောင်ကြီးကြီးက
ဘယ်လောက်ထိအောင်များ အသုံးကျ လို့လဲ…
ငါဆိုရင် မြေကြီးပေါ်မှာလဲ ကောင်းကောင်း လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်။
လေမှာလည်း… ဟောဒီ အတောင်နှစ်ဖက်နဲ့ ပျံချင်သလို ပျံနိုင်ရဲ…. အဲ ရေစပ်နားကို ရောက်လို့ ရေပြင်မှာလည်း
ကူးခပ်လို့ အေးအေးဆေးဆေး ဆော့ကစား နိုင်တယ်။
ငါက ကောင်းကင်ဆို ငှက်၊ ရေမှာက ငါး၊ မြေကြီးမှာ ဆင်၊ ကျွဲ ၊ နွား လိုသတ္တဝါ သုံမျိုး လုံး ရဲ့ စွမ်အား တွေ ရှိတယ် ကွ”
မြင်းက သည်စကား ကြားတော့… ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်ရင်း… “ကိုရွှေငန်းရယ်… ခင်ဗျားက သတ္တဝါ သုံးမျိုးလုံးရဲ့ စွမ်အားတွေ ရှိသတဲ့… ဟုတ်ပါပြီ ဘယ်နေရာမှာမဆို မဖြစ်ညစ်ကျယ်လေး လုပ်တတ် သလောက် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောတတ်ပါဘိ။
မစို့မပို့ ခင်ဗျား စွမ်းအားလည်း ပြန် သုံးသပ်ပါဦး ။ ဝေဟင်မှာ ပျံတယ်တဲ့… ခန္ဓာကိုယ် မနိုင်မနင်း ကို မ သယ်ပြီး မြေကြီးက လွတ်ရုံလေး ပျံတတ်တာကိုပဲ ငှက်စာရင်း သွင်း၊ စင်ရော် တွေ သိမ်းငှက်တွေ လို ဆိုချင်သေး ။
ဘာတဲ့… ရေပြင်မှာဆို ငါး ။ ဟုတ်စ… ငြိမ်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်မှာ တောင် ရွေ့ရုံလေး လှုပ်ရှား လေထန် မိုးထန်တဲ့ အခါ တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား ထွက်ပြေး ရတာများဗျ။
ရေကူး ချန်ပီယံ ကိုရွှေငါးတွေလို သူ့ကိုသူ ဆိုလို့…။ အဲ… မြေကြီးပေါ် လမ်းလျှောက် ပြန်တော့ ရော ဗျာ…
ခြေကားကားကြီးတွေကို ကားရား ကားရား နဲ့ မလှုပ်တလှုပ်လျှောက် ။
လည်ကြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင် နဲ့ တွေ့တဲ့သူ ပေကြည့်ကြည့်ပြီး စူးစူးဝါးဝါး အော်ဟောက် မြည်တွန် တောက်တီး တတ်သေး ။
ခင်ဗျားကို ချစ်လှပါချည့်ရဲ့ဆိုတဲ့ လူတွေ မရှိသလောက် ရှားတာကိုရော သတိထားမိရဲ့လား ကွယ်။
ကျုပ်က ခင်ဗျားပြောသလို တစ်မျိုးတည်း စွမ်းတာ မှန်တယ် ။ ဒါပေမဲ့တစ်မျိုးဆို တစ်မျိုး ဆိုသလောက် စွမ်းတယ်ဗျ ။ ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်က အပိုအလို အသုံးမဝင်တဲ့ နေရာမရှိ ၊
အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြေးဖို့ အားလုံး နေသားတကျ ဖြစ်ထွန်း လာတဲ့ ကောင်ဗျကျုပ်ခြေတံ လက်တံ ကြွက်သားစိုင်တွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လောက် ပြေးနိုင်သလဲ ဆိုတာ အကုန်သိတယ်။
ပြေးသလောက် ခန္ဓာကိုယ်က ခွန်အားတွေ ကိန်းအောင်းလို့ ထွက်လာတယ်ဆိုတာ သိနိုင်တယ်။
ဟုတ်တယ်… ငါက တစ်မျိုးတည်း သမားပါ။
တစ်မျိုးဆို တစ်မျိုး ဆိုသလောက် ထိပ်ဆုံးကို ရောက်အောင် စွမ်းတဲ့ ကောင်မျိုး။ ခင်ဗျားလို ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် တတ်သလို နပ်သလိုနဲ့ဘယ်နေရာမှ တွက်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမကျ တတ်တဲ့ ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူး ´´မြင်းက ဒေါနဲ့မောနဲ့ ပြောလိုက် လေသည် ။
ကျွန်တော် တို့ရော ငန်းလား ၊ မြင်းလား…? တစ်ခုဆို တစ်ခုဆိုသလောက် တစ်မျိုးဆို တစ်မျိုးဆို သလောက် ပေါက်ရောက်အောင် အစွမ်းထက် ကိုရွှေမြင်းလို မိမိစွမ်းတဲ့ဘက်ကို ထိပ်ဆုံးရောက်အောင် တက်ကြပါစို့….။
Previous Article ပန်ကာဖွင့်ပြီး အိပ်တတ်သူတွေ ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ
Next Article သုတ်ရည်ရောင်းပြီး တစ်နှစ်ကို မြန်မာငွေ သိန်းပေါင်း ၁သောင်းခွဲလောက် ရှာပေးနေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံက အကြီးဆုံး နွားထီးကြီး